Channel Istanbul အတွက်ဘေးအန္တရာယ်သတိပေးချက်! မျှော်လင့်ထားသောငလျင်သည် 9-10 ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Channel Istanbul အတွက်ဘေးအန္တရာယ်သတိပေးချက်! မျှော်လင့်ထားသောငလျင်သည် 9-10 ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်
Channel Istanbul အတွက်ဘေးအန္တရာယ်သတိပေးချက်! မျှော်လင့်ထားသောငလျင်သည် 9-10 ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်
02 / 12 / 2019 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
Channel Istanbul အတွက်ဘေးအန္တရာယ်သတိပေးချက်! မျှော်လင့်ထားသောငလျင်သည် 9-10 ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ Naci Görürသည် Kanal Istanbul စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသောထုတ်ပြန်ချက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။ စီမံကိန်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ဖန်တီးနိုင်မည့်အန္တရာယ်များကိုအလေးပေး။ တူးမြောင်းတူးဖော်စဉ်မြေမျက်နှာပြင်လက္ခဏာများအရအလွန်အမင်းလျှောကျခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းနှင့်ပြိုကျခြင်းများရှိလိမ့်မည်ဟုGörürကပြောကြားခဲ့သည်။ အကယ်၍ မျှော်လင့်ထားသည့်ငလျင်ကြီးဖြစ်လျှင် Marmara ပါးစပ်သည် 9-10 ပြင်းထန်မှုကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်နိုင်သည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1-1,5 ဘီလီယံ m3 ပစ္စည်းများကိုတူးဖော်မည်ဖြစ်ပြီးဤareaရိယာရှိဂေဟစနစ်၊ သတ္တဝါနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များသည်အကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မည်ဟုGörürကပြောသည်။ Marmara ရှိတက်ကြွသော fault system ကိုစဉ်းစားလျှင်ဤအလုပ်သည်အလွန်အန္တရာယ်များလိမ့်မည်။ ချန်နယ်တူးဖော်နေစဉ်အတွင်းမြေမျက်နှာသွင်ပြင်များအရမြေနိမ့်ကျမှု၊ မြေပြိုမှုများနှင့်ပြိုကျမှုများများပြားလာလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
“ 9-10 သည်အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်”
အကယ်၍ မျှော်လင့်ထားသောငလျင်ဖြစ်ခဲ့လျှင် Channel ၏ Marmara ပါးစပ်သည် 9-10 ၏ပြင်းထန်မှုကြောင့်အီစတန်ဘူလ်ငလျင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိငလျင်ကိုသတိပြုရန်Görürကပြောကြားခဲ့သည်။ တူးမြောင်းကဲ့သို့သောအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ရွေ့လျားမှုကိုလုံး ၀ သည်းမခံသောတည်ဆောက်ပုံသည်ဤငလျင် (သို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲအဆောက်အ ဦး များ) မှကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံရနိုင်သည်။
Görürသည်မြေပုံများဝေမျှခြင်းအားဖြင့်စီမံကိန်းကိုပထဝီသိပ္ပံနှင့်မြေငလျင်နှင့် ပတ်သက်၍ အကဲဖြတ်ပြီးအောက်ပါစာရင်းကိုဖော်ပြထားသည်။
1- စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်။ မတော်တဆမှုများကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ၀ င်ငွေရရှိရန်အတွက်သင်္ဘောများလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်စေရန် Istanbul Bosphorus သည်။
2- လမ်းကြောင်း: ဒါဟာKüçükçekmece-Terkos ရေကန်အကြားချိုင့်တလျှောက်တူးဖော်လိမ့်မည်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသင်္ဘောဖြတ်သန်းနိုင်သောအကျယ်နှင့်အတိမ်အနက်ကိုဖြစ်လိမ့်မည်
3-SOIL (ဘူမိဗေဒ) ထိုလမ်းကြောင်းသည်Küçük youngerekmece ဒေသရှိ Miocene နှင့်ငယ်ရွယ်သော ပို၍ ပြproblemနာရှိသောမြေဆီလွှာများ (အနည်အနှစ်များ) ကိုဖြတ်တောက်ပြီးမြောက်ဘက်သို့သွားသောအခါ Eocene-Oligocene ယူနစ်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။ ဤကြမ်းပြင်သည်အလွန်ခဲယဉ်းသောထုံးကျောက်များနှင့်ပိုမိုနူးညံ့သောရွှံ့စေးကျောက်၊ ပင်လယ်နက်သို့လမ်းကြောင်း၏အ ၀ င်မှာ flimsy ground ပါဝင်သည်။ အကယ်၍ ဤလမ်းကြောင်းသည်တူးဖော်တွေ့ရှိပါက၊
a) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1-1,5 ဘီလီယံ m3 ပစ္စည်းများကိုတူးဖော်မည်ဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ရန်နှစ်များစွာကြာလိမ့်မည်၊ တူးဖော်သောစက်ယန္တရားများနှင့်ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ချိုင့်ဝှမ်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဂေဟစနစ်၊ သတ္တဝါနှင့်အပင်များအကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မည်။
b) မည်သည့်နေရာ၌မဆိုဤအရွယ်အစားကိုထားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာကျွန်းငယ်များ Marmara တွင်ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။ Marmara ရှိတက်ကြွသောအမှားစနစ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊
c) ချန်နယ်တွင်းတူးနေစဉ်အတွင်းမြေဆီလွှာ၏ဂုဏ်သတ္တိများပေါ် မူတည်၍ မြေပြိုခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းနှင့်မြေပြိုခြင်းများအလွန်များပါလိမ့်မည်။
d) ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်သို့တူးထုတ်သည့်အခါလမ်းကြောင်းသည်ရေနုတ်မြောင်းစနစ်တစ်ခုအဖြစ်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိမြေအောက်ရေလှောင်ကန်များကိုဖျက်ဆီးပြီးဒေသတွင်းဆားငန်မှုဖြစ်စေသည်။
e) ချန်နယ်နှင့် Bosphorus ကြားရှိကျွန်းသည်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်လာပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီးခက်ခဲလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်တူးမြောင်းကိုဖြတ်သန်းသွားသောအဆောက်အအုံများသည်အမြင့်နှင့်မြေအောက်အခြေအနေများကြောင့်ပိုမိုအန္တရာယ်များပြီးအကုန်အကျများလိမ့်မည်။ ဒီကျွန်းကို Thrace ကနေခွဲထုတ်တာဟာစစ်ရေးအရအန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
f) အစ္စတန်ဘူလ်ငလျင်ကိုစောင့်နေတယ်။ အကယ်၍ မျှော်လင့်ထားသောငလျင်ဖြစ်ပေါ်လျှင်၊ Channel ၏ Marmara ပါးစပ်သည် 9-10 ၏ပြင်းထန်မှုကြောင့်ထိခိုက်လိမ့်မည်။ တူးမြောင်းကဲ့သို့သောအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ရွေ့လျားမှုကိုသုညသည်းခံမှုမရှိသောဖွဲ့စည်းပုံသည်ဤငလျင် (သို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲအဆောက်အ ဦး များ) ကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။
g) အာဏာပိုင်များအဆိုအရ Channel ကိုပတ်လည်မှာအနည်းဆုံး3သန်း၏မြို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ငလျင်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေအလွန်အကျွံဆိုသည်မှာအသက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။
h) ဤလမ်းကြောင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အညစ်ညမ်းဆုံးပင်လယ်များထဲမှတစ်ခုနှင့်လက်ရှိသေဆုံးနေသော Marmara ပင်လယ်နက်ကိုပေါင်းစည်းလိမ့်မည်။ စက်မှုဥရောပ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအားလုံးသည် Marmara သို့ရောက်လိမ့်မည်။
I) Marmara ၏သမုဒ္ဒရာပထဝီအနေအထားပြတ်တောက်မှုနှင့်ဤပင်လယ်အတွင်းရှိအောက်စီဂျင်သုံးစွဲမှုအရှိန်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ ဒါကလူနေမှုအခြေအနေကိုပိုခက်ခဲစေလိမ့်မယ်။ တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်း၊ ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းတွင်ပြန်အမ်းငွေထက်တစ်လုံးတည်းသောပမာဏရှိသည်။ ထို့အပြင်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောကုန်ကျမည့်ဤစီမံကိန်းအစားတိုင်းပြည်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်နည်းပညာများဖြင့် Bosphorus ရှိယာဉ်အသွားအလာကိုပိုမိုလုံခြုံစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဒါကစျေးသက်သာပြီးတိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ပါ။
ငလျင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ İmamoğlu, Channel İstanbulတွင်စကားပြောခြင်း…
မြို့ပြသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ငလျင်သတိပေးထံမှ IMO Bursa
Facia ဒီအချိန်တားဆီး! Denizli-Izmir ရထားဇယားများ…
နောက်ဆုံးမှာ Data Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း: TMMOB သတိပေးခြင်းအနေဖြင့်
Metro Istanbul ငလျင်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်…
အစ္စတန်ဘူလ်လက်ထောက် CHP လက်ထောက် - "Ya Channel Ya Ya
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်, အစ္စတန်ဘူလ်အနောက်ကျွန်းနှင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးအန္တရာယ်များ
3 ထပ်ဆင့် Grand Istanbul ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့် Canal Istanbul အတွက်…
RayHaber 02.12.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ